घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज » पर्यटन मार्केटिंग र सुरक्षा आवश्यकताहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • व्यापार यात्रा • cruising • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • निवेश • समाचार • पुनर्निर्माण • रिसोर्ट्स • सुरक्षा • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
डा। पीटर टार्लोले पर्यटन मार्केटिंग र सुरक्षा आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्ने बारे आफ्ना विचारहरू साझा गर्दछन्
पछिल्लो गर्मीमा, पर्यटन उद्योगले केवल एक प्रमुख मार्केटिंग प्रतिमान शिफ्ट मात्र अनुभव गरेन, तर यो आफैंको इतिहासको सबैभन्दा खराब संकटको बीचमा फेला पर्‍यो।
बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकको रूपमा ढिलो भए पनि, पर्यटन अधिकारीहरूले उनीहरूको चिन्ताको आवाज सुन्नु कुनै असामान्य कुरा थिएन कि उनीहरूलाई डर छ कि धेरै वा धेरै देख्न सकिने, पर्यटन सुरक्षा अभ्यासहरूले आगन्तुकहरूको डर र नाफा कम गर्ने निम्त्याउँछन्।
त्यसोभए COVID-19 वास्तविकतामा परिणत भयो, र सुरक्षा को हरेक रूप महत्त्वपूर्ण छ।
यसको तेस्रो दशकको एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो वर्ष विगतका सबै धारणाहरू परिवर्तन भयो।
सबैभन्दा खतरनाक संसारमा, आगन्तुकहरू र पर्यटकहरूले सुरक्षा र स्वास्थ्य सावधानीहरू के भइरहेको छ, उनीहरूको सुरक्षालाई कसरी विचार गरिरहेको छ र आपतकालिन परिस्थितिमा कसलाई बदल्ने भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन्।
आधुनिक पर्यटन अधिकारीहरूले मान्यता दिन्छ कि ट्राभल ईन्डस्ट्रीमा मौलिक प्रतिमान शिफ्ट चलिरहेको छ र पुरानो धारणा अब उप्रान्त हुनेछैन। सरकारले बहुविध शट-डाउनहरू र घरबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण केही वर्ष पहिलेको व्यवसायिक मान्यताहरूसँग बाँच्नु धेरै खतरनाक छ र यसले व्यवसायको अस्तित्व र असफलता बीचमा भिन्नता ल्याउन सक्छ।
यात्रा र पर्यटन उद्योगमा ती संस्था र संस्थाहरू जसले सुरक्षालाई अँगालेर जोड दिन्छन र उनीहरूको बाँच्नको सम्भावना धेरै हुन्छ र यसमा उद्योगका केही भागहरू जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि समावेश छन् जुन सरकारसँग आपसमा सम्बन्धित छ। राम्रो ग्राहक सेवाको साथ राम्रो सुरक्षा मिसिएको प्रदान गर्ने ठाउँहरूमा लचिलोपन र बाँच्नको उत्तम अवसर हुन्छ। जबकि कोहीले पूर्ण सुरक्षा उत्पादन गर्न सक्दैन, न त हामीलाई थाहा छ कि कुन चुनौतीहरू अगाडि छन्, तल फेला परेका प्रविधिहरूले तपाईंलाई सानो लक्ष्य बन्न र छिटो पुनःप्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले तपाईंलाई मार्केटिंग उपकरणको रूपमा सुरक्षा, सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रयोग गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। साँचो प्राप्य सफलताहरूको साथ सुरू गर्नु हो र ती सफलताहरूलाई गति निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
• सुरक्षा र सुरक्षा, र सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्वानहरु र अमेरिकी सरकार मा फरक अर्थ हुन सक्छ, तर यात्रा को दुनिया मा तिनीहरू एक र उस्तै हो। पोष्ट- माCovid युग यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले पहिचान गर्नुपर्दछ कि विषाक्त पानी, कम सरसफाइ, र बन्दुकको फाईलले एउटै परिणाम ल्याउछ: तपाईंको पर्यटन व्यवसायको विनाश। यो यात्रा र पर्यटन उद्योग जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षा बीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ। तिनीहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा छन्। ठिक वा अनुचित रूपमा नकारात्मक प्रचारको ठूलो सौदा प्राप्त गर्ने ठाँउहरु लाई धारणा परिवर्तन गर्न को लागी काम गर्नुपर्नेछ यदि उनिहरु बाँच्ने आशा गर्दछन्।
• सुन्दरता र सुरक्षा हात र हात मा जान। जब वातावरण सुरक्षित हुन्छ, आगन्तुक पनि सुरक्षित महसुस गर्दछन्। पर्यटन सुरक्षा पेशेवरहरुलाई थाहा छ कि राम्रो सुरक्षा क बाट शुरू हुन्छ सुरक्षा को धारणा। सडकहरू सफा गरेर, तपाईंको शहर वरिपरि फूलहरू, रूखहरू र मिनी बगैंचा लगाएर, तपाईं अपराधी हुने सम्भावनालाई मात्र कम गर्नुहुन्न तर तपाईंको समुदायमा समय बिताउने आगन्तुकको इच्छालाई पनि बढाउँदै हुनुहुन्छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि जब तपाइँ कुनै क्षेत्र सीपीटीईडी (वातावरणीय डिजाइन को माध्यम बाट अपराध रोकथाम) को सिद्धान्त अनुसार गर्न को लागी।
• सावधान रहनुहोस् कसले तपाईलाई आफ्नो समुदायमा आमन्त्रित गर्न सल्लाह दिएका छनौट गर्नुहोस्। पर्यटन सुरक्षा विज्ञहरूले पर्यटन र सुरक्षा दुबै थाहा पाउनु पर्छ। त्यहाँ धेरै विश्वविद्यालयहरू छन् जुन पर्यटनमा पाठ्यक्रमहरू दिन्छन् तर केही जसले पर्यटन सुनिश्चितता र पर्यटन बीचको सम्बन्ध बुझ्दछन्। आमन्त्रित गर्नुहोस् जसले समुदायलाई केवल समस्याको समाधान मात्र नभई दर्शन प्रमोट गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। पर्यटन सुरक्षा मात्र एक मार्केटिंग उपकरण हुन सक्छ यदि यो एक समुदाय को कुल दर्शन को एक हिस्सा हो। यसको मतलब यो छ कि स्थानीय आकर्षणहरू, राजनीतिज्ञहरू, प्रहरी विभागहरू, पहिले जवाफ दिनेहरू, होटेल प्रबन्धन, रेस्टुरेन्ट मालिकहरू, र पर्यटन अधिकारीहरू द्वारा यो दृश्य स्वीकार गर्नुपर्छ।
• सुरक्षा, सुरक्षाको गलत इन्द्रिय कहिल्यै नराख्नुहोस् जब यो आगन्तुकको स्वास्थ्यको कुरा आउँछ। तपाईंले पूरा गर्न नसक्ने कुरा कहिले प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। मार्केटिंग प्रकोपहरू हुन्छन् जब वास्तविकता अपेक्षाहरूसँग मेल खाँदैन। प्रशिक्षण र तपाईंको समुदायलाई सुरक्षित र सुरक्षित हुनको लागि तैयार गर्नुहोस्। राम्रो सुरक्षा ग्यास मास्कको कुरा होइन, तर सरल तर्क हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको हस्ताक्षर सहि छ, ट्राफिक बान्की समीक्षा गर्नुहोस्, र अद्यावधिक पर्यटन जानकारी र आपतकालीन नम्बरहरू प्रदान गर्नुहोस्।
• तपाइँको स्थानीय पुलिस र दमकल विभाग, प्राथमिक उपचार प्रदायक, चिकित्सा कर्मचारी र अस्पतालहरु संग सहकारी प्रयास विकास गर्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको प्रथम उत्तरदाताहरु दुबै सार्वजनिक र नाफामुखी पर्यटनका लागि पर्यटन सुरक्षा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर सचेत छन्। उदाहरण को लागी, धेरै पुलिस अधिकारीहरु राम्रो पर्यटन सुरक्षा मा कहिल्यै प्रशिक्षण गरिएको छैन। यो आवश्यक छ कि एक व्यक्ति तपाईंको स्थानीय पुलिस, निजी सुरक्षा, एम्बुलेन्स इकाइहरु, र प्राथमिक चिकित्सा इकाइहरु संग काम गर्ने छ जो पर्यटन र सुरक्षा मुद्दाहरु बीच "अनुवाद" गर्न सक्दछ। धेरै जसो पर्यटन अधिकारीहरु लाई थाहा छैन कि पुलिस र फायर डिपार्टमेन्टहरु कडा Weberian नौकरशाही प्रक्रियाहरु पालना गर्दछन्। यदि तपाइँको पुलिस विभाग को वरिष्ठ प्रशासन एक पर्यटन सुरक्षा नीति र अधिकारीहरु को प्रशिक्षण समर्थन गर्दैन, तब पुलिस सहयोग को कम सम्भावना छ। तपाईको प्रमुखलाई यो बुझ्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् कि पर्यटन सुरक्षा समुदायका लागि मात्र होइन उसको / उनको विभागको लागि पनि राम्रो व्यवसाय हो। उदाहरण को लागी, धेरै पुलिस विभागहरु अझै पनी विश्वास गर्छन् कि उनीहरुको समुदाय को लागी पैसा कमाउन को लागी यातायात टिकट दिईएको छ। तपाईंको शहर सरकारले तपाईंको पुलिस डिपार्टमेन्टलाई बुझाउनुहोस् कि त्यस्ता नीतिहरू केवल मितिबाहेक काल्पनिक पनि हुन्छन्।
• तपाईंको पर्यटन सुरक्षा र सुरक्षा साझेदारहरूको लागि सेमिनार प्रस्ताव गर्नुहोस्। पहिले उत्तरदाता विभागहरू पर्यटन सुरक्षामा सहयोग गर्न बढी इच्छुक छन् यदि तिनीहरूले पनि सुविधाहरू देख्दछन्। उनीहरूलाई देखाउनुहोस् कि पर्यटनबाट नाफाले कसरी नयाँ उपकरणहरू खरीद गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, नयाँ स्थान फन्ड गर्न वा तिनीहरूको बजेटमा मद्दत पुर्‍याउँछ।
• पर्यटन सुरक्षा पेशेवर र सुरक्षा साझेदार दुबै ब्यक्तिगत र अन-लाइन राज्य र क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलनमा भाग लिन प्रोत्साहन दिनुहोस्। सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा प्रख्यात पर्यटन सुरक्षा सम्मेलन लास भेगासमा प्रत्येक वर्ष आयोजित गरिन्छ। अहिले यी धेरै व्यक्ति-सम्मेलनहरू महामारीको कारण एक बर्षको अनुपस्थितिको पछि मात्र जीवनमा फर्केका छन्। प्रत्येक प्रमुख CVB सँग पर्यटन सुरक्षा सम्मेलनमा यसको कानून प्रवर्तन एजेन्सीको कम्तिमा एक सदस्यको एक प्रतिनिधि हुनुपर्दछ।
• तपाईंको समुदायमा के असुरक्षित छ जान्नुहोस् र यी सुरक्षा चासोहरू सुधार गर्न स्थानीय सरकारहरूसँग काम गर्नुहोस्। तपाईंको स्थानीय एयरपोर्ट कति सुरक्षित छ? के होटल र रेष्टुरेन्ट कामदारहरूको पृष्ठभूमि छानबिन गरियो? कति पटक हामी अपडेट गरिएको स्वास्थ्य नियमहरूको लागि जाँच गर्छौं? ट्याक्सी चालकहरूले कति पटक चार्ज गर्दछ वा सवारीहरू खाली गर्दैन? के टूर कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उनीहरूले दिने वाचा प्रदान गर्छन्? पहिचान चोरी घोटालाको रूपमा क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू कति पटक चोरी हुन्छन्? कुन साइबर सुरक्षा समस्या अवस्थित छ वा अवस्थित हुन सक्छ?
• जान्नुहोस् कि तपाईंको स्थानीय विश्वविद्यालयमा को पढ्दैछ, विशेष गरी ईन्जिनियरिंग कोर्सहरूमा र जसले जासुसीको लागि पृष्ठभूमिको रूपमा उसको शैक्षिक क्यारियर प्रयोग गर्दैछ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सामाजिकशास्त्रीय रूपमा उनीहरूको व्यवहार गर्छन् जस्तो कि उनीहरू दीर्घकालीन दर्शकहरू हुन्। धेरै विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई होस्ट गर्छन्, जसको बारेमा उनीहरूलाई थोरै थाहा छ। के विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू तपाईंको समुदायका लागि सकारात्मक वा नकारात्मक छन्? के त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीहरू शैक्षिक शिक्षाको लागि मात्र छन् वा तिनीहरू पनि गोप्य जादू अभियानमा छन्? पर्यटन पेशेवरहरूले विश्वविद्यालयका प्रशासकहरू र सुरक्षा विशेषज्ञहरूसँग काम गर्नुपर्दछ जुन कहिले कानूनको पछाडि जानु हुँदैन, तर उनीहरूको समुदायमा को हुनुहुन्छ र के कारणले गर्दा उनीहरूको बारेमा राम्रो विचार छ।